အကြီးအကျယ် DS emulator Apk - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝပေးဆောင် Cracked - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » အကြီးအကျယ် DS emulator Apk – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝပေးဆောင် Cracked
အကြီးအကျယ် DS emulator Apk – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝပေးဆောင် Cracked
အကြီးအကျယ် DS emulator Apk android ဖုန်းအဘို့အဘယ်သူမျှမအမြစ် marshmallow နှင့် nougat အတွက်လည်းယခု apk running တောင်းဆိုနေတဲ့. အကြီးအကျယ် DS emulator အပြည့်အဝ Apk အားလုံးအချိန်ယဉ်ကျေး၏အရည်အသွေးဟာ android emulator အဆိုပါဂိမ်းပိုကောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့်အတူဂိမ်းကိုခံစားပိုကောင်းစေပါတယ်ရာသည်၎င်း၏လွယ်ကူသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို, သာ. ကြီးဓါတ်ပုံ, ပိုမိုမြန်ဆန်ဂိမ်း, cheat codes တွေကို၏အမှိုက်ပုံနှင့်အတူဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံကို tweaking အများကြီးပို patch အကြီးအကျယ် DS emulator နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. "DS emulator" ပြသထားတယ်နှင့်များစွာသောကိရိယာများပေါ်တွင် DS ဗီဒီယိုဂိမ်းအပြည့်အဝအလျင်ကစားရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆောင်တတ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာ android တွေအတွက်အစာရှောင်ခြင်းကို Nintendo DS emulator ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ အကြီးအကျယ် Apk Display ကိုမျက်နှာပြင်အဆင်အပြင်စိတ်ကြိုက်ထားရှိရေးအရာစွမ်းရည်များတဲ့အိမ်ရှင်နှင့်တကွကြွလာ, controller ကိုစိတ်ကြိုက်, ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ controller များအတွက်အကူအညီ, လျင်မြန်စွာရှေ့ဆက်, google drive ကိုကူညီ, တချို့က high-အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး device များအတွက် rendering ဂရပ်ဖစ်ရှေ့ဆက်တိုးမြှင်. အောက်မှာသတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်များမှာ.
အကြီးအကျယ် DS emulator Apk Download
အကြီးအကျယ် DS emulator Apk
သင်တို့အဘို့လိုက်ရှာနေကြတယ် အကြီးအကျယ် DS emulator Apk Cracked အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုမပါဘဲအခမဲ့ဒီမှာ download လုပ်ပါ. သငျသညျ Download နိုင်ပါတယ် အကြီးအကျယ် DS emulator Apk Paid စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပျော့ Kelo ထံမှ.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: Nova Launcher ကိုချုပ် Apk - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Cracked 2017
အကြီးအကျယ် emulator အင်္ဂါရပ်များ:
2 ×2ကြိမ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှဂိမ်းရဲ့သုံး-D ကိုရုပ်ပုံများကိုတင့်တယ် (အလွန်အကျွံ-အဆုံး Quad-စင်တာကိရိယာများပေါ်တွင်ကျေနပ်ဖွယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်)
အဆိုပါ DS ဖန်သားပြင်၏နေရာချထားခြင်းနှင့်အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်, ပုံတူများနှင့်ရှုခင်းသည် Modes များအတွက်.
လုံးဝ add-on နဲ့ controller နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်မှု Nvidia ကနဲ့တူ gadgets အတွက်ခုခံကာကွယ်ထောက်ခံပါတယ်နှင့် Xperia ကစား.
အဆိုပါ Keep ပြည်နယ်များနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ပြန်လည်စတင်.
cheat codes တွေကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဒေတာဘေ့စနှင့်သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို tweaks.
x86 ကိရိယာများပေါ်တွင်တစ်ဦးသော graphical ဆုတ်ယုတ် Fixed
Fixed ပေါင်းလိုက်သော 3D switching
ဒေါင်းလုပ် အောက်ကလင့်ခ်ကနေ Android အတွက်အကြီးအကျယ် DS emulator Apk
Install အလွန်အမင်း DS emulator Apk
← Nova Launcher ကိုချုပ် Apk – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Cracked 2017 Tubemate – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် youtube က Downloader ကို 2.2.9 →